Java map Journey-Assist
Pejy fandraisana » Sarintany naharitra » Sarintany famantarana Java sy torapasika
Sarintan-javatra mifandraika amin'ny Java
Sarintany amin'ny Java
Ny zavatra rehetra momba ny nosy Java
Ny sarintany hitanao etsy ambany dia feno an-tsehatra. Azonao atao ny mikaroka ireo teny fototra toa ny “пляж", na"scuba diving" 'riandrano"sy ny hafa. Ho valin'izay, ny sari-tany dia hampiseho marika ireo sokajy izay tianao.
Ao amin'ny Widget Interactive eto ambany dia hitanao ny toetrandro ankehitriny any amin'ny nosy Java any Indonesia.
Ao amin'ny zoro havanana ambony dia misy bokotra fidirana amin'ny menio hisafidianana ny sosona aseho (rivotra, oram-baratra, orana, rahona, onja, tsindry avy amin'ny atmosfera ... ary zavatra maro hafa ilaina). Amin'ny toerana misy anao dia voafantina ny sosona misy ny mari-pana amin'ny rivotra